Ahoana ny fomba hamafana ny kaontiko Instagram na hampiato azy vetivety | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hamafana ny kaontiko Instagram
Nanjary iray amin'ireo tambajotra sosialy malaza indrindra ny Instagram Manerantany. Meteza ny fitomboany, ary izy no tambajotra sosialy faharoa fampiasa indrindra eto an-tany. Tamin'ny tranga teo aloha dia efa nilaza taminay momba izany izahay, indrindra momba ny fomba hivoahana bebe kokoa amin'izany, ho fomba ahazoana mpanaraka amin'ity tambajotra ity.
Na eo aza ny lazany, tsy ny mpampiasa rehetra no afa-po amin'ny Instagram ihany. Misy ireo izay te-hijanona tsy hampiasa ilay application intsony, ka izany no antony hamafana ny kaontiny. Ianao koa angamba mieritreritra ny hamafa ny kaontinao amin'ny tamba-jotra sosialy ianao. Saingy tsy fantatrao ny fomba mivaingana ahafahanao manao izany. Hanazava izany aminao eto ambany izahay.
Amin'ny tranga Instagram dia manana safidy roa misy isika. Amin'ny lafiny iray, azontsika atao ny manafoana ny kaonty, izay tsy ny mombamomba anay dia voafafa ao amin'ny tamba-jotra sosialy, fa tsy hiasa na hita maso izany raha tsy miditra azy io indray isika. Safidy azonao ampiasaina raha tsy te ho very ny angon-drakitra ao anatiny, na raha te hiala sasatra amin'ny fampiasana azy ianao.
Raha ny mamafa ny kaontinao Instagram no tianaoMidika izany fa hofoanana tanteraka ny mombamomba azy sy ny atiny rehetra ao. Ka tsy hanana fidirana amin'izy ireo intsony ianao. Fanapahan-kevitra mahery vaika kokoa io, izay tokony hieritreretantsika tsara, mba tsy hirosoana haingana amin'ny fanapahan-kevitra raisina. Ho fanampin'izany, ny zava-misy amin'ny fahaverezan'ny data rehetra, dia midika fa tokony hanao kopian'ny zavatra rehetra nampakarintsika tao amin'ny tambajotra sosialy isika, satria raha tsy izany dia ho very izy io. Ka tsy maintsy ampidinintsika daholo izany, anisan'izany ny horonan-tsary.
Safidy hafa azo atao, dia ny manala ilay application amin'ny findainao. Raha tianao, dia atsaharo ny fampiasana azy mandritra ny fotoana fohy, mba tsy ho ao amin'ny tambajotra sosialy tontolo andro ianao. Izy io dia zavatra afaka manampy antsika hiala sasatra amin'ny fampiasany. Ireto ambany ireto dia manazava bebe kokoa momba ny tsirairay amin'ireo safidy ireo izahay.
1 Fafao ny kaontinao Instagram
2 Esory vetivety ny kaontinao
Fafao ny kaontinao Instagram
Voalohany indrindra dia mifantoka amin'ny safidy manome ny anarany tutorial izahay, izay dia ny famafana ny kaontinao Instagram. Araka ny efa nohazavainay dia fanapahan-kevitra mihoa-pampana ity. Satria heverina fa ny atiny rehetra nakarintsika, miaraka amin'ny mombamomba anay, dia hanjavona mandrakizay ao amin'ny tambajotra sosialy. Ka raha manana sary maro nakarina tao amin'ny tambajotra sosialy isika dia mety tsy fanapahan-kevitra mora ho an'ny sasany izany.
Mba hamafana maharitra ny kaonty Instagram, ny tambajotra sosialy mihitsy no manome fitaovana antsika amin'izany. Izy io dia tranokala iray ahafahantsika manaraka andian-dingana maromaro hamaranana ny famafana ny kaonty ao aminy. Ianao dia afaka ampidiro ity rohy ity.
Eto fotsiny no tsy maintsy ataontsika, raha tsy manomboka ny fotoam-pivoriantsika dia ny miditra mba hahafahantsika mamafa ny kaonty. Matetika ny Instagram dia mangataka antony nanapahanao hevitra. Azonao atao ny manome antony raha tianao, na dia tsy voatery hatao amin'ny tranga rehetra aza. Amin'ity dingana tsotra ity dia efa nanohy mamafa ny kaontinay tamin'ny tambajotra sosialy izahay, zavatra maharitra.
Midika izany fa raha manandrana miditra ianao dia hilaza aminao fa tsy misy intsony ilay mpampiasa. Maimaimpoana ilay solonanarana, izay midika fa misy olon-kafa afaka mampiasa azy rehefa misoratra anarana amin'ny tambajotra sosialy izy ireo.
Esory vetivety ny kaontinao
Raha somary henjana ny safidy teo aloha, mamela antsika hampiasa fomba hafa hanafoanana ny kaonty ny Instagram. A Safidy antsoina hoe disable na deactivate vonjimaika ny kaontinao. Amin'ity fomba ity dia tsy ho voafafa ny piraofilinao ao amin'ny tambajotra sosialy, fa ho nofoanana, ka tsy ho hitan'ny mpampiasa hafa izany, fa ny atiny nampiakarinao tao, ny sary na horonan-tsary, ary ireo hafatra mitoera amin'ny fotoana rehetra.
Safidy tsara izany raha reraka amin'ny fampiasana ny tambajotra sosialy ianao, saingy azo atao izany fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia hampiasa azy io indray ianao. Amin'ity toe-javatra ity, ny fanalana vonjimaika ny kaontinao vonjimaika no safidy tsara indrindra. Hatramin'ny fotoana tianao hampiasa Instagram indray dia mila miditra amin'ny kaontinao fotsiny ianao ary miverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra.
Amin'ity tranga ity dia manana fomba roa hanaovana an'io isika. Raha tianao, azonao atao ny mampiditra an'ity rohy ity, izay tsy maintsy ampidirinao fotsiny ny teny miafin'ny kaontinao ary manome antony (tsy voatery), ny antony itondranao izany fanapaha-kevitra hanafoana ny kaonty. Amin'ireto dingana ireto dia lasa tsy miasa intsony ny kaonty, mandra-pahaiditra Instagram anao indray.
Azonao atao ihany koa ny manao azy amin'ny safidy hanovana profil, fa tsy amin'ny app, fa tsy maintsy miditra amin'ny browser. Hatramin'ny fisoratana anarana dia tsy azontsika atao ny manafoana vonjimaika ny kaontinay. Ka amin'ity tranga ity dia mila ampidirina anaty browser foana izy io, na amin'ny solosainao na amin'ny findainao. Averina indray fa hijanona tsy hiasa ny kaonty mandra-pahatapanao manapa-kevitra ny hiditra ao aminy indray. Rehefa manao an'io ianao dia hiverina amin'ny ara-dalàna ny zava-drehetra, mbola ao ny atiny.
Farany, safidy mitovy amin'ny faharoa, izay azonao raisina raha te hijanona tsy hiasa mandritra ny fotoana fohy ianao. Mety nahatsikaritra ianao fa mampiasa tambajotra sosialy be loatra ianao, na te hijanona tsy hampiasa azy io mandritra ny fotoana fohy, satria tsy hitanao ny ilana azy manohy mampiasa azy.
Ny fomba mahazatra indrindra idirana amin'ny Instagram dia amin'ny findainao. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny miloka amin'ny fanesorana ilay fampiharana amin'ny telefaoninao. Amin'izany fomba izany dia tsy hiditra matetika ny mombamomba anao na ny fampiharana ianao. Mora ny fomba hamafana ny fampiharana amin'ny Android, tsindrio fotsiny ary tazomy ilay kisary ary sintomy mankany amin'ny fako. Raha tianao dia azonao atao ihany koa ny mamafa azy amin'ny toerany, ao amin'ny fizarana fampiharana.
Noho izany, rehefa afaka kelikely dia te-hiverina ianao, apetaho fotsiny ilay fampiharana ary midira. Hitohy toy ny teo aloha ny mombamomba anao, miaraka amin'ny sarinao ary ny hafatra dia ho eo amin'ny tranonkala iray ihany. Safidy hafa io, izay azonao jerena raha te hiala sasatra amin'ny tamba-jotra sosialy ianao indraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tambajotra sosialy » Ahoana ny fomba hamafana ny kaontiko Instagram
Argus Pro, izahay dia mamakafaka ny fanaraha-maso ny horonantsary farany avy ao amin'ny Reolink